Mpanamboatra sofa sy orinasa tsara indrindra | Media
Ny sofa maoderina maosko dia sofa vita amin'ny hoditra miharo fangaro. Feno medo tsy manam-paharoa Formula amin'ny elastika matevina misy fahasamihafana sy volom-borona, manome iray amin'ireo fampiononana tsara indrindra izy io.
Mosko dia endrika kanto miaraka amina sandry marevaka, zaitra tsara ary tsipika madio. Ny sezan'ny seza dia malefaka sy mahazo aina rehefa mipetraka eo amboniny isika. Manana seza tokana sy seza roa ihany koa i Moskoa, safidy malalaka toy ny 1 + 2 + 3 na 1 + 1 + 2 + 3. Ny loko mifangaro ho loko fototra an'io fizarana io, dia mifanaraka amin'ny efitrano fandraisam-bahiny sy ny habakabaka.
Fitaovana fandraisam-bahiny maoderina Italia seza sofa seza
4-seza seza 2880x1020x750mm
Seza seza 3 2080x1020x750mm
1-seza seza 1030x1020x750mm
Fitaovana ivelany: Lamba lamba + hoditra ambony sosona + hoditra microfiber mafy
Cushion / Backrest mipetraka Sponjy mahazaka avo
lafika Famenoana landihazo zazakely
Frame manontolo: Pine Frame
Faritra ambany Chassis tsy misy vy
• lamba rongony premium misy endrika malefaka sy malefaka
• Fikolokoloana mora sy maharitra
• Mitafy maharitra sy mahatohitra pilina
• Kalitao tsy manam-paharoa
Ny sofa sofa dia famolavolana minimalist izay miavaka amin'ny sandry sandry izay namboarina araka ny Ergonomics. Ny seza dia ao anaty ondana lava iray misy fefy matevina sy volom-borona ambany. Ny ondana sy ondana any aoriana dia feno volom-borona midina izay manome aina ilay ondana.
• Seza feno spaonjy avo lenta
• Tsy mafy loatra, na malefaka loatra
• Cushion rebound haingana
• Mamorona fahatsapana mipetraka ao anaty rahona
Cushions Backrest sy cushions seza ao anaty gisa miampita dia mandio fanadiovana mahazatra araka ny voafaritra miaraka amin'ny fantsom-bozaka polyurethane miovaova ho an'ny malefaka. Ny sezon'ny seza sy ny casing anatiny dia amboarina miaraka amina modely tsy misy fangarony miaraka amin'ny amboradara roa sy zaitra vita amin'ny kofehy izay manasongadina ny endrika seza nefa malefaka amin'ny seza.
• Milamina sy milamina
• Tsy mitabataba
• Ny halavany manoloana ny fanadiovana mora foana
Amin'ny hazo kesika miaraka amin'ny vy manodidina azy. Ny firafitry ny seza dia mifono volom-borona polyurethane miovaova-miovaova. Fitaovam-piadiana sy lamosina ao anaty trondro misy hateviny isan-karazany, voaravaka volomboara polyurethane miovaova-miorim-paka. Ireo armrests sy backrests dia afangaro ao anaty quilting any anaty fantsona ho an'ny malefaka fanampiny, ary mandio fanadiovana mahazatra araka ny voalaza.
• mikasika hoditra malefaka
• Akanjo mazava sy tsara tarehy
• Malemy nefa maharitra
• Faharetana avo
Ny sofa vita amin'ny hoditra dia vita amin'ny hoditra Nappa voamadinika ambony miaraka amina firafitra mahafinaritra. Mifanaraka tsara ny fizarana endrika mahafinaritra. Ny loko manga mamirapiratra dia manintona ny saina hisarika ny saina. Ny tongony lava miramirana sy mamirapiratra dia manome fanahy vaovao ny sofa.
Ny firakofana, ny seza ary ny lambam-pandriana aoriana dia azo esorina tanteraka amin'ny dikanteny rehetra (lamba sy hoditra).
Siansa amin'ny vatana
• Ampifanaraho amin'ny zoro mahazo aina ny fiolahana amin'ny vatana
• Omeo fitsaharana ny ambaratonga SPA aoriana
• Esory ny havizanan'ny andro
Ny rafitry ny seza dia misy sombin-kazo izay mampiditra latabatra tampon'ny latabatra misy fiatraikany ambany hita maso izay manome endrika gadona velona amin'ny fandaminana. Voaravaka amin'ny hoditra amin'ny fomban'ny entana vita amin'ny hoditra tsara.
Ny firafitry ny backrest / armrest ary ny casing anatiny dia misy lamina slat mitsangana miorina amin'ny kofehy indroa sy fantsona manodidina ny perimeter.
• hazo hafarana avo lenta
• Miaraka amin'ny tanjaka sy hamafisana
• maharitra mateza
Ny firafitry ny seza amin'ny hazo pime dia nopetahany takela-by, polyurethane avo lenta miaraka amina webbing elastika avo lenta mba hampitomboana ny fampiononana. Ny lamosina metaly mifono volom-borona polyurethane avo lenta, rakotra fibre mifatotra hafanana mifono rivotra vita amin'ny lamba landihazo fotsy sy hypoallergenic mba hampindrana fahalemena.
Ny sofa lamba dia iray amin'ny sokajy vokatra MEDO. Izahay dia mamolavola sy manamboatra sofa vita amin'ny lamba miaraka amina endrika tsy manam-paharoa sy kalitao avo lenta.
Ny sofina lamba MEDO dia noforonin'ireo mpiasanay mahay izay manana traikefa 5-10 taona mahery eo amin'ny sehatry ny indostria. Amin'ny alàlan'ny fanarahana ny fenitra fifehezana kalitao henjana sy ny fikarakarana ny antsipiriany dia azonao atao ny miantehitra amin'ny kalitaon'ny sofina lamba MEDO ary ho afaka amin'ny fanambarana aftersales.
Sofas maoderina vita amin'ny lamba dia famolavolana minimalista miavaka amin'ny sandry sandry izay namboarina araka ny Ergonomics. Ny seza dia ao anaty ondana lava iray misy fefy matevina sy volom-borona ambany. Ny ondana sy ondana any aoriana dia feno volom-borona midina izay manome aina ilay ondana.
Mpanamboatra Sofas vita amin'ny hoditra lafo vidy
Mamorona sofa vita amin'ny hoditra faran'izay tsara izahay amin'ny fomba sy fiononana. Miara-miasa amin'ny hoditr'omby henjana feno, tsy mampandefitra ny materialy sy ny kalitaony velively izahay.
Sofas hoditra MEDO mifantoka amin'ny volavolan-tsokajy vitsivitsy ary milentika amin'ny fanavaozana sy ny antsipiriany. Izahay dia mametraka an-tsakany sy andavany ny loharanon-karena tsara indrindra mba hahatonga ny tsirairay amin'izy ireo ho sangan'asa amin'ny fanangonana. Mampiseho ny fahaizan'ny MEDO amin'ny famolavolana sy famokarana sofa lafo vidy. Sofera Ourleather, azonao atao ny miakatra ny fivarotanao fanaka ary mitondra fahatokisana ny mpanjifanao.
Sofas hoditra maoderina dia sofa vita amin'ny hoditra lafo vidy vita amin'ny hoditra feno voa. Feno formulaire tsy manam-paharoa amin'ny foam-elastika misy fahasamihafana sy volom-borona samihafa, manome iray amin'ireo fampiononana tsara indrindra izy io. Ambonin'izany, misy takelaka latsa sy volom-borona fanampiny manampy fiononana fanampiny amin'ny havoana. Ny sezalony feno seza sy ny sandriny mitongilana dia mampiseho endrika kanto.
Sofas misy fehin-tànana kely malefaka, zaitra tsara, ary tsipika madio. Ny cushion amin'ny seza dia nasiana kitapo kely manify mba hiantohana ny malefaka sy ny fampiononana rehefa mipetraka eo amboniny isika. Ny sezafiarantsika dia manana seza tokana sy seza roa, safidy malalaka toy ny endrika 1 + 2 + 3 na 1 + 1 + 2 + 3 ary L. Mety amin'ny efitrano fandraisam-bahiny sy ny habakabaka io.
Ny sofa sofa dia fomba maoderina, izay mifidy hentitra ny lamba malefaka sy ny hoditra Nappa malemilemy Ankoatr'izay, ny seza misy seza misy kitapo volom-borona, dia miala sasatra malefaka ianao rehefa mipetraka eo amboniny. Ny backrest tsotra mahia dia manafaka toerana malalaka kokoa ho anao. Ity dia fizarana mivelatra malalaka, afaka manampy kabinetra ianao hanatsarana ny fahamoran'ny fiainana.
Ny tongony lava miramirana sy mamirapiratra dia manome fanahy vaovao ny sofa.
Model No. Sary famaritana Size (L * W * H)
A015 Seza seza roa miaraka amin'ny sandry 1630x780x750mm
Seza seza telo miaraka amin'ny sandry 2280x780x750mm
Seza seza tokana 700x760x750mm
Seza seza tokana 780x790x1060mm
Fitaovana ivelany: Hoditra mikrofiber / flannel / rongony / hoditr'omby ambony sosona
Cushion & Backrest mipetraka Sponjy mahazaka avo
lafika Famenoana landihazo saribakoly
Faritra ambany Chassis Hardware
A016 Seza seza tokana 860x700x820mm
Seza seza telo seza 2300x1000x820mm
Seza seza 4 + Chaise 3450x2450x820mm
lafika Famenoana volom-borona
Frame manontolo: Volafotsy vita amin'ny vy vita amin'ny varahina
Faritra ambany Varahina vy
D-823 Seza seza 3 seza + lava Chaise 3000x1880x750mm
Seza tokana + seza seza 3 + Chaise lava 3850x1880x750mm
Seza seza tokana 1120x960x780mm
Seza seza 2 1900x960x780mm
Seza seza 3 2210x960x780mm
L023A Latabatra afovoany 1200x800x320mm
L023B Latabatra zoro 600x600x445mm
Fitaovana ivelany: Lamba rongony + hoditra manokana
Cushion mipetraka Sponjy mahazaka avo
Backrest Famenoana volom-bolo + Volo
Faritra ambany Tongotra vy vy
C + 5807 Seza seza 4 + Chaise lava 3810x910x1630mm
C + 5807 Seza Seza 3 + Chaise 2290x910x885mm
Fitaovana ivelany: Lamba lafaoro + Hoditra omby misy sosona ambony
D-889 Seza seza roa miaraka amin'ny sandry 2070x950x720mm
D-889 Seza seza tokana 1020x950x720mm
Fitaovana ivelany: Hoditra omby ambony sosona
Backrest Cushion Famenoana volom-borona
lafika Cushion mameno volo
Frame manontolo: Hardware + Tongotra mainty stell tongotra
D6085C Seza seza 3 misy seza 2200x900x780mm
Seza seza 2 misy seza 180x900x780mm
Seza seza tokana 950x900x780mm
Fitaovana ivelany: Lamba rongony / lamba teknika lamba / hoditra sosona ambony
Cushion mipetraka Sponjy / famenoana volom-borona mahomby
Teo aloha: Varavarankely mifanila
Manaraka: Window amin'ny Casement